Nhau - Kutumirwa kwakaitwa mushe mushe kune avo vanogunun'una pasi peNational Petroleum Project yeRussia
Kutumirwa kwakaitwa mushe mushe kune mabhurldozers pasi peNational Petroleum Project yeRussia
Gunyana -Kota yekudonha iri kuuya, mwaka wekukohwa une michero yakafuma uye nekuparadzira kunhuwirira! Bulldozer inoisa basa rakaoma revashandi veHBXG yeRussia Petroplem Project yakundwa neHBXG yakatumirwa zvinobudirira kumusika weCIS zvakare!
Uku ndiko kutengwa kwechipiri kwenyoro kwekutumirwa kweTY165-3 dzakateedzana mabulldozers ekambani yeRussia Petroleum. Iyo Russian Petroleum kambani inogutsikana zvikuru nekuita kwekuita kwekuita kwekutanga batch yeSHEHWA brand TY165-3 dzakateedzana mabhurudhoza, kunyanya akanakisa tembiricha yakaderera kuita uye kuvimbika kwakanyanya.
TY165-3 dzakateedzana bulldozer yakajairwa dhizaizi bulldozer inogadzirwa neHBXG pahwaro hwekushandiswa kwezvakanaka zvakanakira Caterpillar's s D6D bulldozer uye zvifambiso zvekutapurirana zveKomatsu 's D55 bulldozer. ine hombe simba rekuchengetera inokwana uye yakavimbika & inogara kwenguva refu hutachiona system.Iyo yakagadziriswa chassis furemu inovandudza kugona kwemuchina wese kuchinjika kune yakaoma kushanda mamiriro.
Kubva kutanga kwegore rino, chirwere cheCOVID-19 chakapararira pasi rose. Ipo ichiita basa rakanaka mukudzivirira kwehosha uye kutonga, HBXG inotarisisa zvakanyanya kuvandudza manejimendi manejimendi, inomhanyisa kugadzirisa chigadzirwa uye kutonga kwehunhu, tarisa pane zvichemo zvevatengi, inotora matanho nekukurumidza, inovandudza danho rebasa, uye inovandudza kugutsikana kwevatengi. Zvichakadaro, iwo wekutengesa musika vhoriyamu akaona kukura kwakadzikama.